नेकपाका नेताको प्रश्न:- "विप्लवजी अब कुन बाटो रोज्ने ?" – Mid Nepal News - मध्य नेपाल खबर - Mid Nepal News - मध्य नेपाल खबर
नेकपाका नेताको प्रश्न:- “विप्लवजी अब कुन बाटो रोज्ने ?”
Mid Nepal News, २९ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०५:१९
फागुन २९- केही समय अगाडीसम्म मात्र पनि सरकारले भनेको थियो की देश बिखण्डन गर्नेसंग वार्ता गरिन्न तर विप्लवसंग वार्ताको प्रयास गरिन्छ । तर अहिले नेपाली राजनितीक क्षेत्रमा यसको ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । सिके राउतसंग ११ बुँदे राजनितीक सहमति भयो भने हिजोमात्र विप्लवलाई अपराधिक संगठन मान्दै प्रतिबन्ध लगायो । विप्लवप्रति कठोर बनेको र देश टुक्राउनेसंग सरकार नरम बनेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल यतिबेला तातिरहेको छ ।
विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि यसले देश झनै युद्धमा जाने खतरा देखेको भन्दै आलोचना पनि भईरहेको छ । यसबीचमा नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) का नेता सूर्य थापाले सरकारको यस कदमलाई सकरात्मक भएको जनाएका छ । सामाजिक सञ्जालमाफर्त उनले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिलाई आपराधिक ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनले यो प्रतिबन्ध विप्लवलाई नभई हिंसा, आतंक र लुटपाटको कामलाई गरेको बताएका छन् ।
उनी लेख्छन् “एनसेलका टावरहरू ध्वस्त पार्ने, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रोहन गुरूङको घरमा बम पड्काउने, चन्दा आतंक मच्चाउने र हिंसाको सहारामा यस्तै के के गर्ने ? सरकारले प्रतिबन्ध विप्लवलाई होइन, हिसा, आतंक र लुटपाटलाई गर्ने निर्णय गरेको हो । हिंसाको प्रिय साधन अपनाएर शान्तिपूर्ण र खुला गतिविधि गर्न शायदै संसारमा कहीकतै मिल्छ ? कुरा स्पष्ट छ । यो कुरा स्वयं विप्लवजीलाई पनि थाहा छ । कुरा चपाउनु आवश्यक छैन” ।
“संविधानअन्तर्गत क्रियाशील शक्तिहरूलाई प्राप्त अधिकार, संविधान मान्न तयार भएका पक्षहरूलाई गर्ने व्यवहार त सरकारले उत्पात र हिंसा मच्चाउने कुनै शक्तिहरूलाई गर्दैन । र, त्यस्तो छुट दिन सक्दैन नै । संविधान नमान्न पाइन्छ, हिंसा मच्चाउन पाइदैन । यो राजनीतिको कखरा जान्ने जोकोहीले नबुझेको विषय होइन ।
अब कुरा आमनेसामने नै भएको छ ।
हिंसा मच्चाए-प्रतिबन्ध हुनु स्वभाविक छ ।
संविधान मानेर आए वा
हिंसाको बाटो परित्याग गरे
प्रतिबन्ध फुकुवा हुन्छ ।
अनि सरकारले नयाँ सहमति गर्छ
अब कुन बाटो रोज्ने ?
बल विप्लवजीको कोर्टमा पुगेको छ ।
बुझ्नुपर्छ बम पड्काएर गरिएका
गतिविधिहरूको प्रतिक्रिया हो
यो प्रतिबन्ध !!!
सरकारले विप्लवलाई बारम्बार वार्ताका लागि आह्वान गर्दा पनि नआएको र हिंसात्मक गतिविधी अपनाएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको हो ।